फोटो कन्सर्नले फ्रेमको ९० प्रतिशत माग पूरा गरेको छ | गृहपृष्ठ
Home अन्तरवार्ता फोटो कन्सर्नले फ्रेमको ९० प्रतिशत माग पूरा गरेको छ
दिनेशराज अर्याल, प्रमुख कार्यकारी अघिकृत, फोटो कन्सर्न, काठमाडौं
२०१७ सालमा काठमाडौंको न्यूरोडमा व्यावसायिक फोटोग्राफीको शुरुआत गरेको स्टुडियो फोटो कन्सर्न नेपालको पुरानो फोटो स्टुडियोको रूपमा परिचित छ । यसका संस्थापक डम्बरबहादुर (डीबी) थापाको २०७३ सालमा निधन भएपछि उनको परिवार र अन्य व्यावसायिक नेतृत्वले हाल यो व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । नेपालको फोटोग्राफीमा डीबी थापा र फोटो कन्सर्नलाई पर्यायवाचीका रूपमा लिने गरिन्छ । रिलबाट फोटो खिच्ने जमानादेखि डिजिटल युगमा आइपुग्दा फोटोग्राफीको स्वरूपमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । रिल (नेगेटिभ) जमानादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा फोटोग्राफीमा भएको परिवर्तन तथा फोटो कन्सर्नले अहिले दिइरहेको सेवा र भावी योजनाबारे कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशराज अर्यालसँग आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकका टीपी भुसालले गरेको कुराकानीको सार :
नेपालको फोटोग्राफीमा पुरानो फोटो स्टुडियोको रूपमा परिचित फोटो कन्सर्न अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
निश्चय पनि नेपालको फोटोग्राफी इतिहासमा कोटो कन्सर्नको आफ्नै खालको इतिहास छ । रिलबाट फोटो खिच्ने जमानादेखि डिजिटल युगमा आइपुग्दा फोटोग्राफीको स्वरूपमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ । हिजोको अवस्था र आजको अवस्था अवश्य फरक छ । ग्राहकको आवश्यकता फोटो धुलाउनेभन्दा पनि पोर्ट«ेट फोटोग्राफीतर्फ छ । विवाहको वा कुनै समारोहको फोटोलाई फोटोबूकका रूपमा प्रकाशन गर्ने क्रम पनि बढेको छ । फोटोबूकलाई नेपालमा विस्तार गर्ने क्रम पनि फोटो कन्सर्नले नै शुरू गरेको हो । र, अहिले यसको माग बढेको छ । उनीहरूको आवश्यकता के छ ? त्यसै आधारमा हामी पनि सेवालाई परिवर्तन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले, पहिले जस्तो स्टुडियोमा आएर फोटो खिच्ने र धुलाउने क्रम कम भएको छ । साथै, खिच्ने र फोटोलाई कुन रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने स्वरूपमा पनि परिवर्तन आएको छ । हामीले पनि समय र प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै परिवर्तन गर्दै आएका छौं । यसको अलावा फोटो कन्सर्नले हेटौंडामा आधुनिक फोटो फ्रेम उद्योग पनि सञ्चालन गरेको छ । यसरी व्यवसायको विस्तार र विविधीकरण गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।
प्रविधिको विकासले फोटोग्राफीको स्वरूप मात्र परिवर्तन गरेको छ कि स्टुडियोमा फोटो खिच्ने परम्परामा पनि ?
फोटो खिच्ने क्रम नै कम होइन, बरु बढेको छ । तर, स्टुडियोमा नभएर आफै खिच्ने क्रम बढेको छ । खिचेको फोटो धुलाउनेक्रम घटेको छ । अहिले मोबाइलको प्रयोगले गर्दा मानिस आफ्नै मोबाइलमा फोटो खिच्ने र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने क्रम बढेको छ । यसैकारण फोटो धुलाउने क्रम घटेको हो । प्रविधिको परिवर्तनले यस्तो भएको हो । अहिले व्यक्तिगत रूपमा स्टुडियोमा आएर फोटो खिच्नेभन्दा पनि इभेण्टवेश (विवाह, पास्नी, पूजापाठजस्ता सामाजिक कार्यक्रम)मा फोटो खिच्ने तथा त्यसलाई फोटोबूकका रूपमा राख्ने प्रचलन बढेको छ । यसका साथै कप (मग), टी–सर्टजस्ता सामानमा फोटो प्रिण्टिङ गर्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । अहिले हरेक कर्पोरेट हाउस, विद्यालय, कलेज तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाले पनि मगहरू, टी–सर्टहरू प्रिण्टिङ गर्ने गर्छन् । यस्तै फोटोलाई प्रयोग गर्ने स्वरूपमा मात्र परिवर्तन आएको छ ।
फोटो कन्सर्नको जुन इतिहास छ, यसको विगत र अहिलेको अवस्थालाई कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?
फोटो कन्सर्न समयसमयमा परिवर्तन हुँदै आएका प्रविधिलाई अवलम्बन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हो । यसरी हेर्दा एकातर्फ एउटा स्टुडियो सञ्चालन गर्नु एउटा पक्ष छ भने यो कम्पनीले नयाँ प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै फोटोग्राफीलाई देशव्यापी बनाउँदै लगेको पनि छ । अर्थात् फोटोग्राफीमा आएका नयाँ प्रविधिबारे देशभर तालीम सञ्चालन गर्ने र त्यो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने काम पनि गरेका छौं । यो कम्पनीले यी दुईओटै कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ । त्यसैले हामीले नेपालमै फोटो फ्रेम उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर हेटौंडामा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।
यो क्षेत्रमा प्रविधिका हिसाबले केकस्ता परिवर्तन भएका छन् ?
सन् २०१३ मै हामीले प्रविधिकै परिवर्तनका रूपमा पोर्ट्रेट फोटोग्राफीका लागि कोडाकको सबैभन्दा ठूलो फम्र्याटको प्रिण्टर ल्याएका थियौं । त्यसबेला त्यसको मूल्य करीब सवा करोड रुपैयाँ थियो । अहिले पनि हामीले फोटोबूकको मेशिनलगायत फोटोग्राफीका अन्य आधुनिक मेशिन भिœयाएका छौं । नयाँ प्रविधिकै स्परूपका लागि ल्याइएको फ्रेम उद्योग पनि त्यसैको कडी हो । समग्रमा भन्दा धेरै खालका प्रविधि आएका छन्, तिनलाई नेपालमा अवलम्बन गर्ने प्रयास गरिएको छ । अर्को कुरा प्रविधिमा मात्र नभई सेवाको प्रकृति पनि परिवर्तन भएको छ । हिजोका दिनमा ग्राहक सेवाका लागि स्टुडियो धाउँथे, अहिले सेवाका लागि हामी ग्राहकको दैलोमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो परिवर्तन र प्रविधिबारे ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यहाँले फ्रेम उद्योगको कुरा गरिहाल्नुभयो । यो उद्योग कस्तो प्रकारको उद्योग हो र यसबाट कस्ता प्रकारका फ्रेम उत्पादन हुन्छन् ?
२ वर्षअघि देखि हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । यो उद्योग सञ्चालन गर्नुअघि मैले चीनमा धेरै प्रदर्शनी हेर्ने तथा उद्योग अवलोकन गर्ने काम गरें । त्यो पनि मुश्किलले, किनकि चिनियाँहरू प्रविधि ट्रान्सफर हुन्छ भनेर सकेसम्म उद्योग अवलोकन गर्न नदिने रहेछन् । किनकि उनीहरू सकेसम्म आफ्नो उत्पादन नै किनोस् भन्ने चाहना राख्दथे । त्यसैले नेपालमा पनि यस्तै उद्योग सञ्चालन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो । त्यसपछि यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो । त्यो बेला यस्ता उद्योग भारतमा पनि भर्खर शुुरू भएका थिए । हामीले ती सामान चीन या भारतबाट ल्याउनुपथ्र्यो । फोटो फ्रेम उद्योगले फ्रेमकै लागि बाहिरको सामान ल्याउनुपर्ने अवस्थाको केही हदसम्म भए पनि अन्त्य गरेको छ ।
यो उद्योगले नेपालको कति प्रतिशतसम्म माग धानेको छ ?
हामीले यो कम्पनी थालनी गरेको भर्खर २ वर्ष मात्र भयो । हामीले अहिले नेपालमा प्रयोग हुने फ्रेमको करीब ९० प्रतिशत माग धानेका छौं । गुणस्तरका हिसाबले पनि चीन र भारतको फ्रेममा ९९ प्रतिशतकै हाराहारीको गुणस्तर कायम गरेका छौं । यसले गर्दा फ्रेमकै लागि बाहिरिने नेपाली पूँजीसमेत बचत भएको छ । यो देशकै लागि राम्रो हो ।
उद्योगमा कति लगानी भएको छ र यसबाट कति रोजगारी सिर्जना भएको छ ?
उद्योगको मेशिनरीमा हालसम्म ५ करोड बढी लगानी भएको छ । बाहिर बजारमा गरिएको लगानी छुट्टै छ । समयसमयमा लगानी थपिँदै जाने क्रम पनि छ । अहिले २४सै घण्टा यो उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । भोलिका दिनमा अझै लगानी थप गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । रोजगारीको हिसाबले अहिले प्रत्यक्ष रूपमा १५ जना जतिले रोजगारी पाएका छन् ।
तुलनात्मक रूपमा फोटो कन्सर्नको सेवा महँगो भन्ने छ, गुणस्तरका हिसाबले अन्यमा भन्दा फोटो कन्सर्नमा के फरक छ ?
सस्तो महँगो भन्ने कुरा त्यसको गुणस्तरमा भर पर्छ । फोटो कन्सर्नले प्रयोग गर्ने मेशिन तथा त्यसको गुणस्तरका कारण अरूको भन्दा केही महँगो देखिएको होला । तर, गुणस्तरका हिसाबले महँगो छैन । फूटपाथमा चिया पिउनु र क्याफे वा स्टार होटलमा बसेर चिया पिउँदा पनि त मूल्यमा फरक पर्छ । यो पनि त्यस्तै हो । अर्को कुरा हामीकहाँ अहिले विदेशमा बस्ने नेपालीले उताबाट खिचेका फोटा तथा नेपालमा आउँदा गर्ने कार्यक्रमका प्रोटेट फोटा यहीँ प्रिण्ट गरेर फोटोबूक बनाएर लैजाने गर्छन् । यसले हाम्रो सेवा महँगो भन्न मिल्दैन । हामीले गुणस्तरको पैसा लिने न हो ।
यस क्षेत्रमा के कस्ता समस्या छन् ? सरकारी नीतिले कुनै समस्या पारेको छ कि ?
विगतमा कच्चा पदार्थ आयातको क्रममा बारम्बार समस्या भोगेकै हो । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान सस्तोमा आउनाले त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो थियो । यसो भएपछि हामीले भन्सार विभागलगायत सरोकारवाला सरकारी निकायमा यसबारे कुरा उठायौं । लामो समय त सुनुवाइ पनि भएन तर पछिल्लो समय भन्सारमा अलि कडा व्यवस्था छ । तयारी सामानको मूल्याङ्कन भएकै आधारमा राजस्व बुझाउनुपर्ने भएपछि उद्योगीलाई केही राहत मिलेको छ । सरकारका नीति स्वदेशी उद्योगमैत्री हुनुपर्छ भन्ने माग हो । यसो हुँदा स्वेदेशी पूँजीको प्रवद्र्धन र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अर्को समस्या जनशक्तिको हो । यो समस्या हाम्रो क्षेत्रमा मात्र नभएर हरेक क्षेत्रमा छ । काम सिक्ने अनि हिँड्ने प्रचनलले त्यही खालको जनशक्ति उत्पादन गर्न समय लाग्छ ।
फोटो कन्सर्नको भावी योजना के छ ?
अहिले नेपाली फोटो फ्रेम उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ धेरैजसो भारतबाट र केही चीनबाट ल्याउने गरिएको छ । यसका लागि विभिन्न रिसाइकल गर्ने सामग्री आवश्यक पर्दछ । अबको योजना हामीले नेपालमा उपलब्ध हुने सामग्रीबाट कच्चा सामग्री उत्पादन गर्ने योजना छ । अरू कम्पनीले गरिरहेको नियमित कामलाई थप प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने नै अबको योजना हो । यसबारे अध्ययन पनि गरेका छौं, सम्भवतः अबको ६ महीनाभित्रै यो प्लाण्ट शुरू गरिनेछ । यसका लागि मुख्यतया थर्माकोल र अन्य केही केमिकल आवश्यक पर्छ ।